Dhageyso Magacyada Saraakiil Lagu Dilay Weerarkii Afgooye. – Bogga Calamada.com
Dhageyso Magacyada Saraakiil Lagu Dilay Weerarkii Afgooye.
Waxaa sii kordhaya khasaaraha dowlada Ridada iyo kuwa shisheeyaha kasoo gaaray Camaliyad Istish-haadiyo ah oo Jimcihii lasoo dhaafay lagu qaaday saldhig ciidan oo ku yaala degmada Afgooye ee gobalka Shabeelada hoose.
Idaacada Islaamiga ah ee Andalus ayaa baahisay magacyada saraakiil ka tirsan dowlada Ridada oo lagu dilay camaliyaddaasi kuwaasi oo uu ku jira taliyihii ugu sareeyay saldhiga uu ka dhacay weerarka Naf hurnimada ah.
Sidoo kale waxaa sii korortay tirada saraakiisha iyo askarta isugu jirta Murtadiinta iyo Kufaarta ee lagu dilay camaliyadda Istish-haadiyada ah ee ka dhacday saldhiga ku yaala degmada Afgooye kaasi oo ahaa saldhig ay ku xareysnaayeen maleeshiyaat ay tababartay dowlada daba dhilifka Imaaraatka Carabta Waxeyna tirada dhimashada gaartay (113) Boqol Toban Iyo Saddex isugu jirta saraakiil iyo askar.
Halkan Ka Dhageyso Warbixibta+Magacyada Saraakiisha Lagu Dilay Weerarka.